1. पेस्ट्रीहरूका बारे खुशीको चाडको साथ अपरिहार्य छ किनभने पेस्ट्रीहरूको गन्धले घर भर्दछ र आउँदो मौसममा न्यानो स्पर्श सिर्जना गर्दछ। तर पेस्ट्रीहरूमा सामग्रीहरू जसले तिनीहरूलाई सुन्दर बनाउनको लागि ताजा र ताजा बनाउँदछ अपरिहार्य छाछ छ। यसको सट्टा यसलाई सुपरमार्केट वा बेकरीमा किन्नुहोस् विशेष नहुन सक्छ र एक अनौंठो स्वाद प्राप्त गर्न सक्छ आज हामी तपाईंलाई बताउन जाँदै छौं कसरी मुस्कान र खुशी बनाउन पेस्ट्रीहरू सजाउन सजिलो छाछ बनाउन। छाछ भनेको के हो?
2. पहिलो कुरा के हो जान्नुहोस्। तिनीहरू ती सामग्री हुन् जुन प्राय बेकिंग र केकहरूमा प्रयोग गरिन्छ। बटर टेल पनि भनेर चिनिन्छ यो बटर क्रीम बनाउनेबाट विश्राम हो। यसलाई मंथन भनिन्छ, र बाँकी तरल छाला हो। यसको आकार र संरचना स्किम्ड दुधसँग मिल्दोजुल्दो छ। वा खट्टा दुध युरोप जस्तो केहि स्थानहरू खाना पकाउन व्यापक प्रयोग र केहि मानिसहरु यसलाई पिउन मन पराउँछन् किनकि यसको दुध जस्तै उस्तै फाईदा छ, तर यो फ्याट-फ्री छ। छाता उपकरण • १ कप पूरै दूध, सादा, नन स्किम्ड (२% फ्याट) दुध • प्राकृतिक एसिड जस्तै निम्बूको रस वा १ स्कूप सेतो सिरका प्रयोग गर्नुहोस्। तालिका
3. कसरी घर बनाउने छाछ बनाउने प्राथमिकता सादा वा २% फ्याट दुधको १ कप कप लि lemon्गको रस वा भिनाग्रेटको १ चम्मच डालो, तर स्किम दूध उपयुक्त छैन। किनभने हामी प्रतिक्रियाको कारण बोसो प्रयोग गर्दछौं
4. एकसाथ सामग्रीलाई हलचल गर्नुहोस् र - - १० मिनेटसम्म छोड्नुहोस्, त्यसपछि नाप्ने चम्चासँग द्रुतगति हलचल गर्नुहोस्। जब सम्म दूध सानो गांठमा जमिन थाल्दैन। यो गाढा गर्न सुरु सम्म प्रयोगयोग्य छ कसरी हाम्रो घर बनाउने छाछ। परिणाम दिन सक्छ जुन सुपरमार्केटबाट खरिद गरिएका जस्तो गहन छैन। तर सरसफाइमा विश्वास गर्नुहोस् र शुद्ध प्राकृतिक स्वादहरू हेरचाहको साथ मिश्रित उत्तम स्वादिष्ट पारिवारिक डेजर्ट घटकहरू सिर्जना गर्न।
5. मेनू घरको बनाइएको छाताको साथ बनेको छ त्यहाँ धेरै मेनूहरू छन् जुन घरमा बनाइएको छाछ प्रयोग गर्दछन्। पेनकेक्स माथि राख्नुहोस्, फल र मह संग सजावट। त्यसोभए तपाईले विशेष पेनकेक रेसिपी पाउनुहुनेछ जुन मिठो र सुगन्धित छ थोरै खट्टा र चिल्लो स्वादको साथ जुन सम्पूर्ण परिवारको साथ खान सकिन्छ।
6. वा यसलाई कुचिएको आलुमा मिक्स गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई एकै मासुमा सँगै चलाउनुहोस्। ग्रील्ड पसलियों संग सेवा यो अविश्वसनीय स्वादिष्ट हुनेछ। नयाँ वर्षको चाडपर्वको बेला केकको सुन्दर रोटी सजाउँनुहोस्। निश्चित रूपमा स्वाद को आयाम अद्वितीय बनाउँछ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो तपाईंको परिवार र बच्चाहरूसँगै पनि बन्न सकिन्छ। घर बनाइएको छाछ तपाईंको खानाको स्वाद बढाउन दिनुहोस्। यसलाई आफैंमा, ठाडो बनाउनुहोस्